Iingcebiso ezili-10 zokuFryning eKhayeni njengePro- Ukufunda malunga
Iingcebiso ezili-10 zokuFryning enzulu ekhaya njengePro
EyeKhala 02, 2017 by URosalie Allen, Iimbono zizonke:
Kufundwa malunga neengcebiso ezili-10 zokubhaka nzulu ekhaya njengepro, indlela yokusebenzisa i-fryer enzulu, kunye nezinto ezinjalo ziya kukuvumela ukuba ube ngumpheki ongcono ekuhambeni kwexesha. Ukwenza ukubulala ekhitshini lakho kulula xa unokufikelela kwiingcebiso ezilungileyo ezivela kwimithombo efanelekileyo. Ke qhubeka ufunda ukuze ufumane ulwazi malunga noku.
Kuya kufuneka ukhethe ioyile yakho ngobuchule ukuba ufuna ukufumana iziphumo ezifunwayo kule ntsimi. Ioyile engathathi cala ilungile kuwe kuba olu hlobo lweoyile aluyi kukunika nantoni na oyisa kuyo njengokhetho olwahlukileyo kwangoko. Kodwa i-master fryer inokusebenzisa ioyile yepenisi ehlanjululweyo ngokukhawuleza ngenxa yokungathathi cala, ukunambitheka okumnandi.
Kuya kufuneka ubeke izandla zakho kwizixhobo ezifanelekileyo xa kusiza ukuthambisa nzulu kwezi ntsuku. Ii-wigs zingabahlobo bakho abakhulu xa kuziwa kukungunda okunzulu, kodwa ipani enzulu ye-sauté okanye isitya esinobunzima obungaphantsi komhlaba singalwenza iqhinga kakhulu apha endleleni. I-thermometer ekhethiweyo iyakukuvumela ukuba wazi ukuba ioyile yakho yokupheka inexabiso lobushushu kwangoko.
Kuya kufuneka ubushushu bakho butshise ngaphambi kokupheka. Ke kuya kufuneka ukuba ubushushu bebushushu bakho buqhubeke phakathi kwe-325 kunye ne-375 yeedigri ezibalulekileyo ukuze ufumane oko ukufunayo. Iqondo lobushushu lokupheka kufuneka litshintshe ukusuka kuma-250 ukuya kuma-325 degrees. Khumbula ukuba ioyile yakho kufuneka igcinwe ishushu.
Kuya kufuneka uphephe nayiphi na ibatch enkulu phaya. Oku kuya kukunceda uphephe nayiphi na imveliso e-crispy engagqitywanga ngexesha. Hlanganisa ngelixa upheka ukuthambisa uluhlu olubanzi lweebatch ezincinci ukuze ufumane iziphumo ozifunayo kule nkqubo phantsi kwendlela.
Kuya kufuneka ixesha kwaye ugaye kangangoko unakho. Sebenzisa isitya esenziwe ngetawuli ukuze ukwazi ukuhambisa izinto ngokukhawuleza. Obu buchule bumangalisa kuba uzakufumana ioyile eninzi kunokuba ubuya kwenza nakweyiphi na i-rack yangaphandle, emnandi ngokwenyani.
Kuya kufuneka ukutya kuwele phambi nje komgama omfutshane, kuba oku kuyakuvumela ukuba udale ukuphazamiseka okuncinci, yiyo kuphela. Usenokuba ucinga ngokulahla ukutya kwakho kukude, kodwa ayisiyiyo eyona ndlela ilungileyo yokwenza le nto kuthiwa kukungca nzulu kwezi ntsuku. Ukwenza uphazamiso oluncinci kulungile kuwe kuba awuyi kuba nakho ukujongana nayo nayiphi na indawo eshushu yeoyile esendleleni.
Kuya kufuneka wazi indlela yokulahla ioyile yakho ngendlela eyiyo. Ke musa ukuthulula ioyile yakho eshushu ishiya nje ezantsi kuba ayizukusebenzela. Galela ioyile yakho kwiibhotile zeoyile wakube upheka. Vumela upholile apha ukuze ube noxolo lwengqondo. Tywina ngokuqinileyo ezi bhotile.
Kuya kufuneka unqande ukuphosa iziqwenga ezininzi zokutya kwiibhotile zakho. Ke kuya kufuneka uthenge i-strainer ye-mesh ngokukhawuleza okukhulu. Ezi bhotile kufuneka zigcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo ixesha elininzi. Oku kuyakuvumela ukuba ube nokuzithemba ngakumbi kunye noxolo ngokuhamba kwexesha. Ukutya kwakho akusayi kunuka njengentlanzi okanye isitya ngaphezulu kwexesha.
Ukuphinda usebenzise ioyile
Ungayisebenzisa kwakhona ioyile yakho kwiiseshoni ezininzi ukuba uyafuna. Umele nje ioyile yakho ipholile kwi-wok yakho ukuze uyigcine. Ngoku ungasebenzisa ikomityi enkulu yokulinganisa ukuthulula ulwelo ngaphandle. Okulandelayo, kuya kufuneka ugalele ulwelo lubuyisele kwibhotile yakhe yasekuqaleni usebenzisa itreyini.
Kuya kufuneka ugcine ioyile yakho icocekile ukuba ufuna ngokwenene ukwenza ioyile ikwenzele umsebenzi. Ke kufuneka uphephe ukukhukulisa ioyile yakho ngeenxalenye ezincinci zokufuma kunye nokutya ixesha elingaphezulu. Ngokugcina ioyile yakho icocekile, uya kwandisa ubomi bayo ngexesha.
Khumbula kwakhona ukuba kufuneka uthathe ioyile yakho ngendlela efanelekileyo ukuze ufumane iziphumo ozifunayo kwezi ntsuku. Ii-wigs zingabahlobo bakho bokwenene xa kuziwa ekusebenziseni ioyile kubo. Ukugcina ioyile yakho icocekile ukuze uyisebenzise kwakhona ihlala ilicebo elihle ukuba ungasebenzisa amathuba kwangoko.
URosalie ngumsunguli we I-UnderRoofs apho yena nehlakani lakhe elinablogi malunga nelona khaya lilungileyo kunye nekhitshi, iingcebiso kunye namaqhinga, kunye neetekhnoloji ezilungileyo eziza kukunceda wenze uchulumanco ekhayeni lakho. Uqokelela kwaye abelane ngeengcebiso ngendlela onokuyiphucula ngayo ikhitshi kunye nekhitshi ukuze ube nakho ukwenza oko.
Kuya kufuneka ubeke izandla zakho kwizixhobo ezifanelekileyo xa kusiza ukuthambisa nzulu kwezi ntsuku.
Ulwazi lwangempela lwe-WW
URosalie Allen Julayi 2, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho ukupheka, Ukupheka Ukupheka, Frying enzulu, Ungayisebenzisa njani iFryer enzulu. Bookmark le Permalink.
January 30, 2018 IiKhitshi ezintlanu zeKhitshi ezinokuSetyenziselwa iSidlo sakho seSidlo rhoqo ngeveki Ngaba uyakonwabela ukulungiselela isidlo sakho ngaphambi kwexesha? Ngaba uyafuna ukufumana ezinye izixhobo zokwenza inkqubo ibe lula? Ukuba kunjalo, ke uze kwindawo elungileyo! Apha ngezantsi, unokufunda ezinye izixhobo ezilungileyo zokutshiza ikhitshi lakho ngelixa ulungiselela. 1. I-PowerFFerer XL Le Fryer yahlukile kwindlela ii-fries; ukuba, isebenzisa umoya endaweni yeoyile. Ngokwenkampani, oku kukhokelela kwiikhalori ezingama-80% kunokuba bekuya kuphuhliswa ngeendlela zendabuko […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Disemba 20, 2019 Izinto ezi-5 ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuzibophelela kulwandiso lwasekhaya New home extensions in Adelaide can be a big decision, regardless of where exactly in the house you’re looking to extend. If you’re planning to commit to a home extension, it’s important to determine which parts of your household you don’t like and how you’re going to resolve those issues. Questions to pose may be whether or not extra bedrooms are needed for the kids? Is your kitchen big enough to entertain your friends when they come over for dinner? Or is your Master Bedroom in […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Ngamana 29, 2017 Iingcebiso xa ukhetha iKhompyuter Splashback elungileyo Indawo yekhitshi lakho ngaphezulu kweebhentshi nangaphantsi kwazo zonke iikhabhathi ezingaphezulu kwesiqhelo ihlala ivezwa. Oku kunokukhokelela ekutshabalalisweni kweoyile kunye nezinye izinto eziyimfuneko ezinokushiya uxinzelelo olusisigxina kudonga lwekhitshi lakho. Ukujongana nezi ngxaki, indawo ebonisiweyo inokugutyungelwa ngoncedo lwe-splashbacks. Ezi zinto zinqabileyo zihlala zilula ukuzicoca kwaye zinosulelo. Xa ufumana i-splashbacks ekhitshini kufuneka ulondoloze izinto ezininzi njenge-splashbacks ekhitshini kufuneka […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
January 17, 2017 Iingcebiso zokufaka i-Workmop yakho entsha yeLaminate Ukuba ukhethe indawo yokusebenza ye-laminate kwikhitshi lakho elitsha, ngokuqinisekileyo unendleko ezisebenzayo kunye nenomdla kakhulu ezandleni zakho. Olu hlobo lomsebenzi womhlaba likwakuvumela ukuba ulilungele, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba uhlawule ingcali njengoStonetech1 ukuze ikwenzele. Kulapho uqala khona umsebenzi onzima! Uqala phi? Okokuqala, thatha ixesha lakho! Nokuba lixesha lakho lokuqala okanye uyenzile le izihlandlo ezininzi ngaphambili, ungaze ungxamise umsebenzi onje, kuba ukungxama kuthetha […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Septemba 15, 2016 Iindlela ze-DIY zale mihla: Iingcebiso ezi-5 zokuLungiswa ngokutsha kweKhaya ngokulula Umyinge ophakathi wokuhlaziywa kwamakhaya unokubiza ucwangciso oluninzi kunye nolwazi ukuze ugqitywe ngempumelelo. Oku kuyinyani nokuba uceba ukuwenza wonke loo msebenzi ngokwakho okanye nokuba unekhontrakthi yokuwenza. Ukunceda ukwenza olo lwakhiwo ngokutsha luhambe ngokutyibilikayo kwaye ngokulula, nazi iingcebiso ezintlanu ekufuneka uzigcine engqondweni. Yenza iJenali Njengomntu ophambili ophetheyo kulwakhiwo lwakho, uya kuqhubeka unokuninzi kokucingayo. Ukugcina ijenali kuya kukunceda uhlele […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
January 13, 2020 How To Choose The Right Microwave A microwave is a useful invention. It cooks quickly, easy to clean. In addition, some options allow you to show imagination and create different, even complex dishes, and not just heat up the soup and pasta. The article will discuss how to choose the right microwave oven based on goals, as well as other factors that affect usability. From it, you can find out what kind of ovens are generally prepared by microwaves, what are the control features and why it is important to pay […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
January 17, 2017 Umsebenzi weKhitshi Umsebenzi wokuSebenza-Izigqibo ngezigqibo! Xa uyihlobisa ikhitshi okanye uyitshintsha kwakhona, unezigqibo ezininzi ekufuneka uzenzile, kwaye ngokuqinisekileyo enye yazo yeyomsebenzi oza kuwusebenza. Ufuna ukuba loluphi na ukhetho onquma kulo ukumela uvavanyo lwexesha, ufuna ukuqinisekisa ukuba luyahambelana nohlahlo-lwabiwo mali lwakho, kwaye ufuna ukwazi ukuba luzakuba lukhetho olufanelekileyo kwindlela ophila ngayo kunye nobungakanani / uyilo ikhitshi lakho elikhoyo. Ngethamsanqa, zininzi izinto phambi kwakho, kwaye kubalulekile […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya
Ngamana 10, 2017 Ungayicingela njani kwakhona imali-mboleko xa amaxabiso esenyuka Zininzi izizathu zokuphinda uxhase ubambiso, kodwa wonke umntu uyaqonda ukuba ukuba amaxabiso enyuka asiloxesha lilungileyo lokwenza oko. Ngaba kunjalo ngokwenene? Abacwangcisi bezezimali baqinisekisa ukuba amaxabiso aselungile ukuba aphindwe kwakhona kulo nyaka. Apha ngezantsi unokufumana isikhokelo esifutshane ngendlela yokuphinda uphumelele xa amaxabiso ekubambeni anyuka. Akukho sidingo sothuka. Usengaba nethuba lokuba nesibambiso sekhaya laseMelika xa usilandela imigaqo ethile. Ngaba Uyakhawuleza Ziindaba ezilungileyo ezi […] exhonyiweyo Imali yezezindlu